Jehovha ndiMwari Wevapenyu | Swedera Pedyo naMwari
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Lingala Lithuanian Malagasy Norwegian Nzema Oromo Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
‘Iye ndiMwari Wevapenyu’
Mwari angatadza kumutsa vakafa here? Haangambotadzi! Chokwadi hapana chingambokunda “Mwari Wemasimbaose,” rungava rufu kana mumwe “muvengi” chero upi zvake. (Eksodho 6:3; 1 VaKorinde 15:26) Mwari ane simba rokumutsa vakafa uye anovimbisa kuita izvozvo munyika itsva. * Asi nei tiine chokwadi chokuti izvozvo zvichaitika? Jesu Mwanakomana waMwari anotipa mhinduro inogona kuita kuti tive netariro yakasimba.—Verenga Mateu 22:31, 32.
Paaitaura nevaSadhusi vakanga vasingatendi kuti vakafa vanomutswa, Jesu akati: “Kana kuri kumuka kwevakafa, hamuna kuverenga here zvakataurwa kwamuri naMwari, achiti, ‘Ndini Mwari waAbrahamu naMwari waIsaka naMwari waJakobho’? Iye haasi Mwari wevakafa, asi wevapenyu.” Pano Jesu aitaura nezvekukurukurirana kwakaita Mwari naMosesi pagwenzi raibvira moto makore anenge 3 500 akapfuura. (Eksodho 3:1-6) Jesu aireva kuti mashoko akaudzwa Mosesi naJehovha okuti: “Ndini Mwari waAbrahamu naMwari waIsaka naMwari waJakobho,” anoratidza kuti vakafa vachamutswa zvechokwadi. Anoratidza sei?
Funga zvinotevera. Panguva yakataura Jehovha naMosesi, varume vanoti Abrahamu, Isaka naJakobho vakanga vatova nenguva refu vafa. Abrahamu akanga ava nemakore 329 afa, Isaka akanga ava ne224, uye Jakobho 197. Kunyange zvakadaro, Jehovha haana kuti “Ndaiva” asi akati “Ndini” Mwari wavo. Jehovha akataura nezvevarume ava vakanga vafa sokunge kuti vaiva vapenyu. Sei akadaro?
Jesu akatsanangura achiti: “Iye [Jehovha] haasi Mwari wevakafa, asi wevapenyu.” Funga kuti mashoko iwayo anorevei. Dai vakafa vaisazomutswa zvaizoreva kuti Abrahamu, Isaka uye Jakobho vacharamba vakafa. Kana zvikadaro, zvinoreva kuti Jehovha ndiMwari wevakafa nokusingaperi. Zvaizoitawo sokuti Jehovha haana simba rokumutsa vashumiri vake vakatendeka kubva murufu.
Tichifunga izvi, tingaguma tatii nezvaAbrahamu, Isaka, Jakobho uye vamwe vashumiri vaJehovha vakafa vakatendeka? Jesu akataura mashoko ane simba okuti: “Kwaari vose vapenyu.” (Ruka 20:38) Chinangwa chaJehovha chokumutsa vashumiri vake vakatendeka kubva kuvakafa chichatozadzika zvokuti iye anotofunga nezvavo sokunge kuti vapenyu. (VaRoma 4:16, 17) Jehovha acharamba achivayeuka kusvikira nguva yake yokuvamutsa yakwana.
Jehovha ane simba rokumutsa vakafa
Unofarirawo kuzoonana nehama yako yakafa here? Kana zvakadaro, iva nechokwadi chokuti Jehovha ane simba rokumutsa vakafa. Hapana chinomutadzisa kuzadzisa vimbiso yake yokumutsa vakafa. Wadii kudzidza zvakawanda nezvevimbiso iyi uye nezvaMwari achaizadzisa? Kana ukadaro uchava neukama hwepedyo naJehovha, ‘Mwari wevapenyu.’
Ndima dzeBhaibheri dzamunogona kuverenga muna February
Mateu 22-28–Mako 1-8
^ ndima 3 Kuti udzidze zvakawanda nezvevimbiso yaMwari yokumutsa vakafa munyika itsva ichange ine vanhu vakarurama, ona chitsauko 7 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.